Çerkezköy Silivri ကျိုးရိုးလှည်း loaded သဲတွေထဲမှာဖြုတ်ချခံခဲ့ရသည် - rayhab ဖြစ်ပါသည်
[20 / 09 / 2019] 1915 Canakkale တံတား Foot မြှင့်တင်ရေး Continues	17 Canakkale
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်Çerkezköy Silivri ရိုးများထဲတွင်သဲ installed Wagon ဖြုတ်ချခဲ့သည်ကိုဖိ
13 / 04 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, ခရီးဝေးရထားစနစ်များ, ရထားလမ်း, လှိမ့်စတော့ရှယ်ယာ, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ, ကုနျတှဲ 0
မှောက်သဲ-ဝန်ကိုထမ်းရွက်လှည်းပေါ်တွင်ဝင်ရိုးချိုးအကြား cerkezkoy silivri
Çerkezköyကျိုး -Silivri အတွက်သွင်ပြင်လက္ခဏာကုန်တင်ရထား၏ Axles ။ ပျက်စီးနေရိုးရထားစက်လုပ်သမားအခက်အခဲမှောက်သဲတင်ဆောင်သည့်လှည်း၏တဦးတည်းရပ်တန့်ကြောင်းသဘောပေါက်။
နာရီဆန့်ကျင်နံနက်ယံ၌သောကြာနေ့, ဧပြီ 12 03.00 ပေါ်တွင်လက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ Çerkezköy-Silivri ရထားများအကြားလမ်းအာကာသ၏ရိုးဝန်ကျိုးခဲ့သည်။ မအကြောင်းကို3များအတွက်စက်လုပ်သမားကျိုးရိုးပျက်စီးနေရိုးမှသူ၏လမ်းပေါ်ခဲ့ကီလိုမီတာသဘောပေါက်။ ထိုအခါလှည်းရထားနှင့်အတူပြဿနာတစ်ခုသတိထားမိသူအင်ဂျင်နီယာအခက်အခဲရပ်တန့်နိုင်ဘူး။ အဆိုပါဖြစ်ရပ်တစ်ခုမှာသဲတင်ဆောင်လှည်းမှောက်ခဲ့သည်။ ရထားလမ်းနှင့်ရထားပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတူရကီပြည်နယ်မီးရထား (TCDD) ကအဖြစ်အပျက်သို့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုစတင်ခဲ့ကြောင်းလေ့လာသိရှိထားပြီးနေစဉ်။
Kadir: Metrobus Silivri, Silivri မက်ထရိုအနာဂတ်သည်အထိတိုးချဲ့လိမ့်မည်! 11 / 10 / 2012 အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန် Kadir Topbas များအတွက် Silivri Creek အဘိဓါန်ပွုပွငျလုပ်ငန်းခွင်သွားသဖြင့်အဆိုပါအခန်းအလွတ်ကျွန်မနဖူးစည်းစာတမ်းတွေနှင့်အတူကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ခဲ့သည် "ဟုအိပ်မက် Stream တိုးတက်မှုအားဖြင့်လွတ်ဖြစ်သွား, စစ်မှန်တဲ့ရောက်လာပြီ" ။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Topbas ပန်းပွင့်ပေးခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားတွေ, ကျောင်းသားများနှင့်ဒေသခံလူများကအကြီးအအကျိုးစီးပွားနှင့်လည်းတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ သီးခြားစီTopbaşကိုတုံ့ပြန်သောပြင်းထန်သောအကျိုးစီးပွားနိုင်ငံသားများ, "ငါကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမျိုး၏ Silivri ပြင်းထန်သောစိတ်ဝင်စားလာသောအခါငါကြုံတွေ့ရ။ ငါသိပ်သူတို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ " ကမ္ဘာကြီးကိုအစ္စတန်ဘူလ်နှင့်တူရကီအပေါငျးတို့သဒေသများအတွက်အလွန်လျင်မြန်သောပြောင်းလဲမှုနှင့်အသွင်ပြောင်းခြင်းကိုသည်းခံကြောင်းဖော်ပြထားသည်ကြိုဆိုပွဲအခမ်းအနားအပြီးတွင်သူ၏မိန့်ခွန်းထဲမှာTopbaş, ပြောင်းလဲမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၏အရှိန်အဟုန်ကပြောသည်။2months ago ...
တူရကီတွင်တပ်ဆင်ဆီလွဲသွားရထားကတ်ကြေး Drop ပွင့်လင်းစိုက်ထားသောခဲ့သည် 14 / 03 / 2019 ရထားများ၏လောင်စာရေနံတင်သင်္ဘောတင်ဆောင်လှည်းတင်ဆောင်တူရကီရဲ့ Sincan ခရိုင်ရေတံခွန်မှာလွဲချော်ရပ်တန့်။ တူရကီဌာနခွဲဥက္ကဋ္ဌ Ozdemir, BTS "ဟုအဆိုပါလေ့လာမှုကာလအတွင်းလက်ဝဲတစ်ဝက်အချက်များဖို့လောင်စာရထားလမ်းလွဲချော်ရပ်တန့်ကြောင်းအချက်ပြပါ" ဟုသူလောင်စာရေနံတင်သင်္ဘောတင်ဆောင်လွဲသွားရထားအဆိုပါရေတံခွန်ဧရိယာမှာလှည်း loaded ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တူရကီရဲ့ Sincan ခရိုင်ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးမှပိတ်ပစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ BTS တူရကီဌာနခွဲကသမ္မတအစ္စမေးလ် Ozdemir, ရထားမော်တော်ကားတပ်ဆင်လောင်စာဆီတိုင်ကီများ, သူကြောင့်အချက်ပြနေစဉ်အတွင်းကတ်ကြေးအလုပ်ကိုအပြည့်အဝပိတ်သိမ်းဖို့လွဲသွားကပြောပါတယ်။ "ထိန်းချုပ်စင်တာကိုအချက်ပြသေပြီ-အဆုံးကတ်ကြေးအတွက်အမှားအယွင်းများရှိခဲ့ပါလျှင်သတိပြုမိနှင့်ရထားလွဲချော်ရပ်တန့်ကြလိမ့်မယ်," Ozdemir ကပြောသည်ဟုဆိုသည်: "ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်မပြီးဆုံးသေးသော၏ဗဟိုအချက်များဖြစ်ပါတယ် ...
Wagon installed သဲ
Manisa အတွက်ပုလဲ GS Yuasa,3။ စက်ရုံဖွင့်လှစ်
Cable ကိုထုတ်လုပ်သူများ, သင်၏ Teknik
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ စက်တင်ဘာလ 2019 (359) သြဂုတ်လ 2019 (507) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (541) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (976) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)